Izibuko ze-Snowboard | Khetha okuhamba phambili ngezinyathelo ezi-3 nje - i-ULLER
Manje njengoba isizini ski iza, sekuyisikhathi sokucabanga ukuthi yikuphi okungcono kakhulu amagabha eqhwa ukuthi singangena emakethe.
Sithanda iqhwa! Akukho lutho njengokuhambisa phansi ithrekhi ebhodini lakho, ukuvumela amasu akho nokuhamba kwakho kugele eqhweni. Uma kungenjalo ubungazi, bathi itafula lokuqala le- ukushibilika eqhweni Yasungulwa ngonyaka we-1965 nguSherman Poppen, unjiniyela waseMuskegon, eMichigan (USA) okwathi ngelinye ilanga wanquma ukubopha izikisi ezimbili wazinikeza amadodakazi akhe ukuthi adlale eqhweni. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, yathuthukiswa futhi yathandwa eminyakeni edlule njengomdlalo oweqisayo, uthatha ukwanda okwandayo phakathi kwabasubathi. Kodwa-ke, kuze kwaba yi-2015 lapho yafakwa khona emidlalweni yama-Olimpiki futhi yathola ukuqashelwa komhlaba wonke namuhla.
Namuhla, izigidi zabantu emhlabeni wonke zenza lokhu ukushibilika eqhweni ngokomsebenzi bese izigidi ezengeziwe zinikezelwe ukuvakasha amabala ilungele imincintiswano kazwelonke neyamazwe omhlaba noma umane ungene ezifundweni nasezinyathelweni zokuqala ku ukushibilika eqhweni.
Kepha kunento eyodwa noma iyiphi la madoda anesibindi (ochwepheshe noma abasanda kufika) abafana ngayo: bahlala bephethe ibhodi labo, imishini yabo nezinto zabo amagabha eqhwa. Kubaluleke kakhulu ukuthi basebenzise ibhodi elifanele elinamabhuzu afanelekile, izingubo ezishisayo, amagilavu, amaski noma izibuko ze-snowboard ukuvikela nokulangazelela ukwenza isenzo.
Kungazwakala kuyinkimbinkimbi, kepha kulula kakhulu! Lapho sikhetha eyethu amagabha eqhwa Kunezikhathi ezintathu ezibalulekile ezizokusiza ukuthi ukhethe okungcono kakhulu, futhi lapha siyakuchazela wena.
Uma ungena ezweni le-snowboarding, noma ufuna ukufaka izingilazi zakho ezindala ngezingcono, sinefomula enhle ongayikhetha kahle ngokuzayo lapho uthenga amagabha eqhwa. Khetha okwakho ngezinyathelo ezi-3!
ISIHLUTHULELO SOKUKHETHA AMAKHASI EBHOLA LEQHWA LEBHODI
1. UKUVIKELWA KWELANGA
Lokhu akuyona imfihlo kunoma ngubani: ukuvikelwa kwamehlo kubaluleke kakhulu uma kukhulunywa amagabha eqhwa. Kungenye yezizathu ezibaluleke kakhulu zokuthi kungani kufanele uhlale uphethe i- izibuko zeqhwa. Futhi, ngaphezu kwalokho, kungenye yemininingwane ebaluleke kakhulu okufanele uyibheke lapho uyithenga, okungukuthi, uma une-99% noma i-100% yokuvikela ilanga ukukuvikela ngempela.
Njalo hlola ukuthi banokuvikelwa kwe-UV- 400! Lokhu kusho ukuthi ifayela lakho le- amagabha eqhwa Bazovimba noma imiphi imisebe ye-ultraviolet nge-wavelength engaphansi kwama-nanometers angama-400, futhi isihlungi sabo sizokuvikela emisebeni ye-UVA ne-UVB.
Ngaphezu kwalokho, ukukhanya okwedlulele ezindaweni ezineqhwa kuyinto enkulu kakhulu, ikakhulukazi ngesikhathi sasebusika ngoba isikhundla selanga esibhakabhakeni siphansi. Imisebe ibonakaliswa ngokuthambekela okuyingozi kwamehlo ngaphansi kwale mibandela futhi kuyacasula kakhulu uma singagqoki imaski yethu noma amagabha eqhwa ezanele.
Ngokufanayo, kubalulekile ukucabangela ukuthi iqhwa ngaphansi kwalezi zimo lizokhombisa ukukhanya lapho kukhulunywa ngokwesayensi. Lokhu kungenxa yokuthi umbala omhlophe awukungenisi ukukhanya, kepha kunalokho uyakuxosha. Ngale ndlela, ukuxhumana neqhwa kusho ukuthi ubona ukukhanya kusuka ezinhlangothini nasezimpambanweni eziningi ezahlukahlukene, ngakho-ke kufanele sizivikele kangcono kunakuqala izibuko ze-snowboard noma izifihla-buso zokushushuluza ezisezingeni eliphakeme.
Kubalulekile futhi ukubheka ukuthi i- amagabha eqhwa athobele izindinganiso ze-ISO ukukuvikela kahle futhi zivunywa yi-CE ngokuhambisana namazinga wokuphepha aseYurophu.
I-Las izibuko ze-snowboard Ngeke nje bavikele amehlo akho emisebeni yelanga, zizosiza nokusebenza kwakho lapho ushibilika eqhweni, ngoba zizothuthukisa kakhulu ukubonakala kwakho ngezenzo. Kuzoba kubaluleke kakhulu ukuthi ukhethe ama-pair amahle kakhulu izibuko zeqhwa,ngenani elihle kakhulu lemali, njalo unaka amalensi awagqokayo, kusuka kumklamo nombala, esigabeni.
- NGOKWEMIBALA -
Izibuko ze-Snowboard kuningi, kepha bambalwa okuyibo abazokusiza uthuthuke kwezemidlalo. Impela uzothola izinketho eziningi zemibala futhi uzozibuza ukuthi ngikhetha yiphi? Ingabe bayohluka? Iqiniso ukuthi ahlukile futhi anezici ezithile ukuze ukwazi ukubonakala kangcono lapho ushibilika. Funda okwengeziwe ngemibala efanelana kahle neyakho amagabha eqhwa!
Amagagasi aphuzi eqhweni
Ziyanconywa lapho ukukhanya kuphansi; uma u-snowboard ngesikhathi sokuhwalala noma sekusa, futhi futhi uma kunenkungu emvelweni noma usuku kuguqubele noma kuguqubele ngokwengxenye.
Izihlahla zeqhwa zeqhwa ze-Orange
Umbala olandela ophuzi, ngakho-ke futhi kukhonjiswa ngezinsuku ezinamafu kancane ngokukhanya okuncane. Kodwa-ke, lo mbala welensi usiza ngokwengeziwe ukukhuphula izinga lokungafani kombala okubona ngamehlo akho.
Amagobhi eqhwa elibomvu
I-Las izibuko ze-snowboard okubomvu okunemibala kunciphisa kakhulu ukukhathala kwamehlo futhi kukunikeze ukujula okuhle kakhulu kwensimu, ngaphezu kokukhulisa umehluko ngemibala. Lo mbala welensi ozikhethele wona unconyelwa ikakhulukazi izibuko zemidlalo namaski ezindaweni ezineqhwa, nakwezemidlalo ezingekho emgwaqeni.
Amagabha eqhwa elihlaza okwesibhakabhaka
I-Las izibuko ze-snowboard Ngamalensi aluhlaza okwesibhakabhaka anconyelwa izinsuku ezinelanga, kepha futhi ungazisebenzisa ngezinsuku ezinamafu kancane. I- amagabha eqhwa ngamalensi aluhlaza okwesibhakabhaka banikeza umbono “obandayo” we-panorama, futhi ngalokhu bayasiza ukumelana nokukhanya okufudumele noma okuphuzi okweqile okuvela elangeni, futhi banciphise ukukhathala kweso okwenzeka njengomphumela.
Amagobolondo eqhwa ayinqeni (onsomi noma onsomi)
I-Las izibuko ze-snowboard ngamalensi ansomi afeza inhloso yokunciphisa ukweqisa kokukhanya okuvela ekukhanyeni kokukhanya emvelweni, kukusiza ukuba ubone kangcono umugqa wezinto nabantu abakuzungezile. Ukuthenga izibuko ze-snowboardngamalensi ansomi ubuye uthuthukise nombono wakho wensimu ojulile, kanye nombono wakho wemibala yangempela yemvelo.
Izihlahla zegreyboard zeqhwa
Amalensi ampunga anciphisa inani eliphakeme lokukhanya okungenzeka, ngakho-ke kunconywa ukuthi lisetshenziswe ezinsukwini ezinelanga namahora aphezulu phakathi nosuku. Ngaphezu kwalokho, zikusiza ukuthi ubone kangcono imibala yangempela kumvelo ezungezile.
Amagabha eqhwa aluhlaza okotshani
Kunconywa ikakhulukazi lapho uzijwayeza imidlalo yasebusika ebandakanya isivinini esikhulu nokuhamba emisebenzini yabo. Zisiza iso lapho ligxile ezintweni ezizungezile futhi zilisize lihlukanise imingcele yalo nokuqhathanisa. Le modeli ye- izibuko ze-snowboard inciphisa umbono ngezinsuku ezinamafu kakhulu, futhi isiza ukulinganisela ukukhanya ezinsukwini ezinelanga.
-NGOKUVUMELANA NE ISIKHATHI SAMAKHALIDI
Okuhle kakhulu amagabha eqhwa Bazokuvikela kuzo zombili izinsuku ezinelanga futhi ezinamafu, kepha kuphela uma usebenzisa isigaba esifanele samalensi. Usuyabazi? Izibuko zekhwalithi ziza nesibonakaliso sesigaba, kusuka ku-CAT0 kuya ku-CAT4, uma zihlunga noma zivumela ukudlula kokukhanya okudlula kukho ngezinga elikhulu noma elincane. Kulokhu, isigaba 0 kungaba esikhanya kunazo zonke, bese kuthi 4 kube mnyama kakhulu.
Kusobala. Zingabi nombala noma zibe nombala okhanyayo futhi othambile. Ukuhlunga kokuhambisa kwayo okulula kusuka ku-80% kuye ku-100%.
Umbala okhanyayo futhi ofanele ukusetshenziswa lapho kukhanya kuncishiswa, izikhathi lapho ilanga lishona ekuntweleni kokusa, nezinsuku ezinamafu. Ukuhlunga kwayo okuhambisa ukukhanya kusuka ku-43% kuya ku-80%.
Amakristalu amaphakathi aphakathi. Ukuhlunga kokuhambisa kwayo okukhanyayo kusuka ku-18% kuye ku-43%, kuboniswe kumacala wokukhanya okuphakathi.
Unombala omnyama ngokwanele ukuzwa ukhululekile elangeni, kanye nangezikhathi zokuphakama. Ukuhlunga kokukhanya kwayo kuhlunga kusuka ku-8% kuye ku-18%. Zikunikeza izinga elifanele lobumnyama kwezemidlalo yangaphandle, lapho ukukhanya kokukhanya kuphakathi nendawo kuya kokukhulu.
Lesi sigaba samakristalu simnyama impela. Eqinisweni, azivunyelwe ukusetshenziselwa ukushayela. Zisetshenziswa ezimweni ezikhanyayo lapho amalensi weGaba 3 enganele. Ukuhlunga kokuhambisa kwayo okukhanya kusuka ku-3% kuye ku-8%, kube mnyama kakhulu phakathi kwazo zonke izigaba.
Isigaba 1 nesigaba 3 yizona ezifanele ukusetshenziswa kakhulu lapho kuhanjwa ngeqhwa ngokuya ngesimo sezulu lapho uzithola usutholakala khona.
KUNGCONO UMA BENGAMABHODLELA EQHWE NGAMAGESISI KAMAGNETIKI ATHINJELANAYO!
Kunconywe kakhulu ukuthi ukhethe amagabha eqhwangama-lens agijimayo angaguqukayo akuvumela ukuba ukhethe okwamanje isigaba se-lens esikufanela kangcono. Izimo zesimo sezulu zingaguquka kusuka kumzuzwana owodwa ziye kolandelayo, futhi uma zakho amagabha eqhwa inale nzuzo, ngoba uyishintsha ngemizuzwana embalwa bese usebenzisa yona eyiyo.
Imidlalo yeqhwa efana nokushushuluza noma ukushibilika eqhweni bayimidlalo eyeqisayo neyi-adventure okufanele ithathwe ngokungathi sína kakhulu. Lokhu kudinga okokusebenza okulungile, kanye nokuzilungiselela ngokomzimba nangokwengqondo ukuqinisekisa izikhathi ezinhle kakhulu zobumnandi ne-adrenaline.
3. IZINTO NOKULUNGELA
Hlala ukhumbula ukuthi lokho okhetha ukukukhethela i- amagabha eqhwa nokulingana kahle ebusweni bakho kuzoqinisekisa ukuthi bafeza kahle umsebenzi wabo wokuzivikela, hhayi kuphela ekukhanyeni kwelanga kepha nangaphandle jikelele.
Amathiphu wokukhetha ama-goles ahamba phambili e-snowboard:
Khetha izingilazi ze-snowboard ezilingana ubuso bakho kahle. Kumele babe namateyipu ama-anti-slip ukuwalungisa kahle ebusweni bakho nasekhanda lakho lokuzivikela. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthi balingane ubuso bakho kahle, kufaka phakathi izindawo eziseceleni, ukuze zimboze ngokuphelele umbono wakho wangaphandle.
Izibuko ze-snowboard ezikhanyayo. Bona ukuthi iyiphi impahla i- izibuko ze-snowboard. Khetha isibonelo i-thermoplastic polyurethane, ekhonjiswa kakhulu, futhi bazokusiza ukuletha ikhwalithi ephezulu nokukhanya.
Ngohlelo lwe- “Anti-fog” noma "Antifog". Uma wakho izibuko ze-snowboard Banalolu hlelo oluzokusiza ukuthi ugweme ukufinyaza ngenkathi uhamba ngeqhwa.
Izikebhe ze-Snowboard ezinesistimu yokungenisa umoya yangaphakathi. Okuhle kakhulu ukuthi banobuchwepheshe be-anti-condensation. Lokhu kuvumela umoya ukuthi uphinde usakaze ukuze ubonakale kangcono.
Manje ngokuqinisekile uzizwa ukhululekile futhi ukulungele ukujabulela ukuzijabulisa kwe ukushibilika eqhweni ngale nkathi. Ngalezi zinyathelo ezi-3 engqondweni ungakhetha indlela ye- amagabha eqhwa kufanelekile ukuzwa i-adrenaline yomdlalo. Zizwe ukhululekile ukukhetha okungcono kakhulu futhi ushintshe umbono wakho lapho uzijwayeza i- ukushibilika eqhweni! Landela lezi zinyathelo futhi ube uchwepheshe ku- izibuko ze-snowboard.
Abagibeli bamabhayisikili besifazane abayi-10 abangena emlandweni
Kulokhu okuthunyelwe sithatha uhambo sikhuluma ngomkhondo wabagibeli bamabhayisikili besifazane abangena emlandweni. Sikunikeza yonke imininingwane ngabo ukuze ugqugquzeleke njalo lapho uphuma
Yini ongayinika umsubathi wakho osukwini lwakhe?
Umama wakho ungumgijimi owazalwa futhi awazi ukuthi uzomnikani ngosuku lwakhe olukhethekile? Ungakhathazeki futhi usithembe! Sikushiyela imibono eminingi emihle ukuze ubukeke kahle nomama wakho nomcamelo.
Imibuzo nezimpendulo eziyi-100 mayelana ne-Kilian Jornet!
Akekho ozwa indaba kaKilian Jornet oyoke angacabangi. Umsubathi owakhuphuka inani eliphakeme le-Everest kabili ezinsukwini eziyisithupha futhi owayeneminyaka eyi-6 wayesevele eseyidlulile yonke imigomo ohlwini lwakhe